Kolontsaina sy kolom-bazaha | NewsMada
Kolontsaina sy kolom-bazaha
Eny tokoa ! Ankalazaina androany 14 febroary, « fetin’ny mpifankatia », izany hoe olon-droa mifankatia. Daty napetraky ny vahiny io, fa manaraka koa isika Malagasy, indrindra aty an-tanàn-dehibe, miaina amin’ny fivoaran’ny lazaina hoe “fandrosoana”. Tsy misy maharatsy izany, satria fotoana tokony hanamafisan’ny mpifankatia ny fifankatiavany ny vanim-potoana toy izao, sady maro rahateo ny resy lahatra matoa manaraka ny fankalazana azy.
Fa manaitra ny saina ity trangam-piarahamonina, mifandraika amin’ny lafiny fiarahan’ny olon-droa ity. Toa haseho any amin’ny tambajotra sosialy ny fiainana anatiny eo amin’ny mpifankatia, na tsara izany fa indrindra na ratsy koa. Fantatry ny daholobe ny fiainan’ny olon-droa, satria aseho any anatin’ny tambajotra sosialy. Toa vao mainka mahafaly ny mpamoaka vaovao, ny gazety an-tsoratra, ny haino aman-jery ireny vaovao mivoaka ireny, ary azo tsorina fa tsy misy intsony ny “fetra”.
Rehefa tena zohina, kolom-bazaha na kolom-bahiny ity “saint valentin” ity. Lasa raharaham-barotra, fotoana hanaovana doka “hanjifan’ny mpanjifa”, izany hoe fitadiavam-bola.
Na izany aza, efa hatry ny ela ny Malagasy no nanana ny fifankatiavana, ny fihavanana, ny fifandeferana. Saingy indrisy, tsy fantatry ny taranaka ankehitriny intsony izany, lazaina fa “efa lany andro”, fa ny “Saint Valentin” izao no malaza sady tsy maintsy hankalazaina, na misy ny hoenti-manana ao an-tokantrano na tsy misy, fa tsy maintsy mamorona ny tsy misy, mba hisehosehoana eo amin’ny fiarahamonina fa mifankantia, nefa sao endrika ivelany no tena hisehosehoana.
Ho an’ny kolontsaina malagasy, “ny tokantrano tsy ahahaka”, midika, aza aseho ny rehetra ny tena fiainanao ao anatiny ao!